Igumbi lokuhlala kunye neB Gerghis - I-Airbnb
Igumbi lokuhlala kunye neB Gerghis
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguGerard
UGerard ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo yethu yokuhlala kumgangatho wokuqala, iquka igumbi lokuhlala kunye nebhedi ye-sofa, apho abantu aba-2 banokulala khona, ikhitshi exhotyiswe ngefriji kunye nefriji, igumbi lokulala labantu aba-2 kunye negumbi lokuhlambela elinokuhlamba okuhambayo, okwabelwana ngalo. Kukwakho neterrace entle.
Izithako zesidlo sakusasa zibandakanyiwe.
IHechtel ngumasipala ozolileyo apho unokuthatha iihambo ezininzi ezintle kwaye ibekwe ngaphakathi kuthungelwano olubanzi lweendlela zebhayisekile.
IHechtel-Eksel ngoyena masipala uluhlaza eFlanders apho kulungile ukuhlala.
Siyavuya ukukunceda ngophendlo lwakho lwendawo yokuhlala eyonwabisayo!
Indawo yethu yokuhlala, kumgangatho wokuqala, inegumbi lokuhlala elinebhedi yesofa, apho abantu aba-2 banokulala khona, ikhitshi elixhotyiswe ngefriji kunye nefriji, igumbi lokulala labantu ababini elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokulala elineebhedi ezimbini ezingatshatanga kunye ne lokuhlambela ne-walk-in kwiishawara.. Kukwakho neterrace entle. Kukwanokwenzeka, ukuba uyanqweneleka, ukugcina iibhayisekile zakho ngokukhuselekileyo.
Izithako zesidlo sakusasa zibandakanyiwe, ukuze iindwendwe zethu zifumane isidlo sakusasa ngokuzolileyo kwaye zingaphazanyiswa.
4.83 · Izimvo eziyi-76
Amathuba amahle okuhamba e-Hechtel eneendunduma ezintle zangaphakathi e-De Brand, kwi-Resterheide indawo yehlathi enamachibi kunye ne-arboretum yokufundisa yabantwana kwaye ngokuqinisekileyo uthungelwano lwendlela yomjikelo e-Limburg kunye nokuhamba ngebhayisikile kwi-treetops kwi-9 km kwaye kufutshane nendlela entle yebhayisekile. phakathi ezidibanayo 516 no 518. am Beringen kufuneka ngokuqinisekileyo akayi kubuzwa xa ukutyelela le ndawo.
Ngokuqinisekileyo sikulungele ulwazi malunga neziganeko kunye neendawo ezinomdla kule ndawo.